တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.: သားသား ကျောင်းစတက်ပါပြီ။
Posted by Maw at 3:02 AM
နေကောင်းလား အစ်မရေ. facebook link ကနေ လိုက်လာတာ သားသားလေးတောင် ကျောင်းသွားနေပြီနော်. အစ်ကို ရဲ့နားခိုရာ လဲ သွားကြည့်သေးတယ် အသစ်မရှိတာကြာလှပေါ့
February 12, 2011 at 5:04:00 AM PST
နေကောင်းကျန်းမာပါတယ်။ ကိုထွန်းခိုင်ကတော့ ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ကိုယ်လဲ ခုမှ ပြန်ရေးဖြစ်တာ။ လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ။း)
February 12, 2011 at 5:49:00 AM PST